Kukholelwa ukuthi abantu abaningi baluma izipikili zabo. Abaningi bayaziqhenya, ngisho nangaphandle kokuqaphela. Lokhu kwenzeka ngesikhathi umuntu ecabanga ngento ethile, ukhathazekile, ukhathazekile. Ngamunye wethu unomkhuba omubi, futhi wonke umuntu ufuna ukukhipha. Kubani kakhulu kunzima ukuyeka ukuphuza, noma ukubhema, noma yikuphi izidakamizwa, futhi ngubani onomkhuba omubi wokugubha unyawo lwakhe. Bambalwa abantu abakwaziyo ukuyeka ukuthungatha izinkuni ngokungenabuhlungu futhi ngaphandle kokulimaza izipikili.
Into ebaluleke kakhulu ukuzilungisa kahle futhi uzimisele ukufeza umphumela oyifunayo. Yini evimbela wena ukuba ususe umkhuba omubi onjalo, ukugoba izipikili? Yini eyenza ukwenze? Le mibuzo kufanele icatshangelwe kahle. Ngokuqinisekile uthanda izipikili ezinhle nezihle, ezijabulisa iso, ungenza umuthi omuhle, kodwa lokhu akusebenzi kuwe njengoba unalo mkhuba. Umkhuba wokugaya izipikili ubizwa ngokuthi i-onychophagy. Kungaba umkhuba olimazayo kokubili abadala nabantwana. Kunezizathu eziningi zalesi sifo. Udinga nje ukuyeka ukubamba izinzipho zakho. Futhi okudingayo ukwenza lokhu, sizozama ukukutshela futhi sikunikeze iseluleko esilungile.
Indlela yokususa lesi sifo.
Umkhuba wokugaya izipikili ungenye yezindlela ezimbi kakhulu. Kunezizathu eziningi zokususa. Phela, lokhu kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zomzimba emantombazaneni. Bakhokha okuningi. Ubani ongathanda izipikili zakho ezinamahloni? Ngakho-ke, kubalulekile ukuyeka izipikili. Zilungiselele ngokwakho ngokujulile. Futhi ngenxa yalokhu udinga ukucabanga konke ukulimala kwalo mkhuba.
Uma ungakhathazeki ngezipikili zakho, futhi uqhubeke ukuhlafuna izipikili zakho futhi, ungaqinisa izinzipho zakho. Bazovutha futhi bangase baqale ukulimala, ungathola ukugula okungathí sina, okuzoba nzima kakhulu ukwelapha. Kumele sikusize ukuvimbela lokhu, ngoba konke kungaphetha ngokungenelela kokuhlinzwa.
Ungabeki izandla zakho emlonyeni wakho, futhi ungavumeli izingane zenze. Bavame ukuthatha isibonelo kubadala, futhi kungase kube nzima ngabo ukuba bangazijwayele kulo mkhuba.
Izandla zethu ziwumthombo obaluleke kakhulu wesitoreji segciwane. Ezandleni izandla eziningi ezincane, amabhaktheriya, ukutheleleka kugcina. Futhi konke lokhu kugcina kugwa emzimbeni wethu.
Isizathu esiyinhloko se-onyphagia ukucindezeleka, izinzwa, ukucindezeleka okuqhubekayo. Omunye ngezikhathi ezinjalo uhlwitha iminwe yakhe, futhi ubani obetha izipikili zakhe. Kodwa othile ugoqa izipikili zawo akuzona lezi zizathu, kodwa kunalokho ngokuphambene nalokho. Isibonelo, kunoma yisiphi isikhathi esibucayi lapho becabanga noma ecabanga ngento ethile, benza izinqumo ezibalulekile, ecabanga ngezinto ezibalulekile zokuphila.
Into ebaluleke kunazo zonke kubazali ukubona ukuthi ingane yakho iqala ukupihla. Kodwa izingane zihlala zithatha izibonelo kubantu abadala. Ososayensi baye bafakazela isikhathi eside ukuthi uma emndenini omunye wabazali unesifo sokuvuvukala, ezikhathini eziningi umntwana uphinda amaphutha akhe, uqala ukuhlupheka nalomkhuba. Izingane zifuna ukulingisa abazali bazo, futhi zizama ngazo zonke izindlela ukuze zizikopishe, zilingise yonke imikhuba yazo. Uma unomntwana emndenini wakho, khona-ke kufanele ucabange ngokujulile ngezenzo zakho.
Ngezinye izikhathi abantu baluma izipikili zabo ngokuqeda ukuhlukunyezwa ngokwabo. Isibonelo, lapho umuntu ehlambalaza ngento ethize, uhlambalaza, ngesikhathi esifanayo ugoqa izipikili zakhe, futhi avame ukuwafica cishe egazini, azilimaze yena.
Abanye abantu baqoqa izipikili zabo kuphela ngoba baphazamisa. Lokhu kungasho ukuthi izipikili azizinakekelwa kahle. Izipikili ziqala ukuphuka futhi zivele zishaye.
I-polisi ye-Nail isenemvelo yengqondo. Kubalulekile ukukhuluma nomqondisi wezokwelapha, noma ukulwa nalo ngokuzimela, usebenzisa ezinye izindlela izindlela ezithile.
Indlela yokunqoba umkhuba wokugaya izipikili?
Lokhu kuzodinga umzamo omkhulu. Into ebaluleke kunazo zonke akufanele kube nokwesaba. Ungesabi phezu kwezicathulo. Zama ukungathinti konke, ngaleyo ndlela uzivikele ezenzweni ezingadingekile. Sebenzisa amateyimu enomphumela omuhle. Ngokuvamile hamba emgwaqweni ngaleyo ndlela uziphumule, uthathe inqubo yokuphumula.
Ungasiza kakhulu indlela yokusebenzisa into ebabazayo ngezipikili. Isibonelo, i-iodine, noma usakaze emasinini esikhonkwane.
Ema pharmacy ungathenga imali eningi, ngokumelene nokuluma kwe-nail. Paint izipikili zakho nazo. Uma uluma uzozwa ukunambitheka okungenakusihlwa. Uzosusa noma yisiphi isifiso sokubeka izipikili ezindebe zakhe futhi.
Uma imbangela yezipikili zakho kungenxa yokuntuleka kokuzilungisa, qiniseka ukuthi uqala ukuwahambisa. Sebenzisa imizuzu engu-10-15 ngosuku. Izipikili ezinemibala emihle azizange zikhathaze noma ubani. Njalo wenze izinqubo ezincane zezipikili, ukuze uziqinise.
Zama ukusebenzisa izipikili ezingaphezulu noma ugcizelela. Ngesikhathi uhamba ngezinsimbi, ngaphansi kwazo kuzokhula ngokwakho. Ngakho akudingeki uwalume. Futhi ekugcineni uzojwayela izipikili zeplastiki bese uyeka ukubamba izinzipho zakho.
Ungazijezisa ngokwakho ukubamba izipikili, noma ubuze abantu abakuzungezile ngakho. Ukuze babhale phansi ngezipikili ze napodnesenie ezindebe.
Ukukhetha i-remover hair
Ukuhlunga kwe-Thai ku-CROWN THAI SPA - ukuthinta injabulo
Ukusetshenziswa kwamafutha okugcoba amadoda nabesifazane
Ama-honey scrubs ngobuhle nempilo yomzimba
Isisekelo sokudla okucebile nokunomsoco ku-oatmeal ebisi
Ama-varicose emithanjeni yabesifazane
I-puff pasties nge inyama enobisi
Pie neklabishi ku-yogurt
Ukudla okunempilo komfazi okhulelwe
Izindlela zokuphatha indoda ethandekayo ngosizo lwabaphathi bakhe
Ukuphulukisa impahla ye-parsley
Yini indoda ezayo efana nayo?
USergey Bezrukov wabuza umsebenzisi wokuxhumana nabantu mayelana nenkonzo
Amafantasi e-Erotic of indoda nowesifazane